कमरेड पुष्पलाललाई सम्झदा...
प्रकाशित मितिः श्रावण 7, 2077
670 पटक पढिएको
संसार कोरोना रोगका कारण थिल थिलोबनिरहेको छ । आजको दिनसम्म पनि यो रोगबाट मुक्त भइ हाल्ने स्थितिमा कुनै पनि मुलुक पुगि सकेका छैनन् । यो रोग मानवको काबु भन्दा बाहिर भएको सबैले स्वीकार गरेका छन । हाम्रो देश नेपालमा अन्य मुलुकमा जन छेति भए झै कोरोनाले जनको छेति कम गरेको छ । आशा एबं बिस्वास गरौं कि आउने दिनहरूमा पनि कोरोना रोगलाई नेपाली जनताले परास्त गर्नेछन् ।
कोरोना रोगको दबाई आजसम्म बनिएको छैन । यो रोगलाई परास्त गर्न जसलाई रोग लाग्दछ ,उसैको आन्तरिक शारीरिक उर्जाले त्यो रोगको भाइरससित लडाई लडेर जित्न भण्दा अर्को उपाय छैन । संसारका scientist हरुको भनाइ यहि छ । नेपाली राजनीतिक क्षेत्र त्यसमा पनि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपामा कोरोना जस्तै रोगि भाइरस छिरेको धेरै दिन भयो । पार्टीका शिर्षत तहका नेताहरुकोबिचमा पटकौं पटक बैठकहरु सम्पन्न भए । तर निष्कर्ष निकाल्न सकिरहेका छैनन् । बिभिन्न संचारका माध्यमहरुबाट शिर्षत नेताहरुको बिचार दिनानुदिन आइरहेका छन । ति विचारहरू मध्य धेरै विचारहरुका बारेमा तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुबाट कुरी कुरी भइरहेको छ । नेताहरु नेपाल राष्ट्र अनि नेपाली जनतालाई हेरेर विचार बनाउने समस्या समाधान गर्ने बाटोमा भण्दा पनि उनिहरुको पोजिसन के हुने ? भन्ने तहबाट उनिहरुको तर्क पेस गरिरहेको देख्न अनि सुन्न पाइन्छन् ।
दुई कम्यूनिष्ट पार्टी एक भए पछि तल - तलसम्म दुई पार्टीको जनसंगठन , बर्गिय संगठन अनि स्थानीय संगठनलाई आजसम्म एक बनाउन सकिरहेका छैनन् । बिगतका दुई पार्टीका एक पार्टीको कार्यकर्ता बनिएता पनि आपसमा दरिलो विश्वासका साथ काममा लागिरहेको पाइदैन । हजारौं जुझारु कार्यकर्ता जिम्मेवारीबाट विमुख छन् । पार्टीको बैठकमा उपस्थित रहेर आफ्नाे कुरा अनि विचार प्रस्तुत गर्ने तहबाट विमुख छन ।
बर्तमान नेपाल सरकारले हाम्रो देशको नक्सालाई घटाएर होइन कि बढाएर नक्सा जारी गर्न सफल भएको छ । कतिपय प्रादेशिक सरकारहरुले आफ्नो प्रदेशको नामाङ्कन गर्न सकिरहेका छैनन् । सबै राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउमा राखेर एकै स्वरका साथ प्रदेशको नाम घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन् । मुलुकको राजनीतिक दलहरुका बिचमा अनेकौं खालका विमतिहरु अनि स्वार्थहरु रहदा रहदै संघीय सरकारले देशको नक्साबारे सबै राजनीतिक दलहरुलाई एक ढिक्का बनाएर नेपालको नक्सा सर्बसम्मत रुपमा जारि गरेर विगत देखिको नक्सा भन्दा बाहिरको भुभागलाइ हाम्रो हो भनेर हामी भण्दा शक्तिशाली राष्ट्र भारतलाई शिर ठाडो पारेर भन्नु पक्कै पनि चानचुने कुरा होइन । नेपाल राष्ट्र अनि नेपाली जनताले गर्व गर्ने यो काम नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एबं बर्तमान नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको हो भनेर मेचीदेखि महाकालीका प्रत्येक नेपालीले नअड्किकन भन्न सक्दछन ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एक बनाउने अवधारणा प्रस्तुत गरेर नेपाली जनताका विचमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको धेरै बर्ष बितेको छैन । नेपाली राजनीतिक यात्रामा कम्यूनिष्ट पार्टीले जनताबाट धेरै विश्वास गरि मत जाहेर गरेको मैले बुझे अनुसार पहिलो पटक यहि हो । नेपालको राजनीतिक दलहरु मध्य कम्यूनिष्ट पार्टी ठुलो पार्टी बनिएको पनि यसै पटक हो । यि कामहरु संभव बनाउन पनि बर्तमान प्रधानमन्त्रि एबं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ( प्रचण्ड ) नै हुन । नेपाली जनताले यसरी नै बुझेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाको अबस्था यस्तो रहदा रहदै दुबै पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिनु पर्दछ भनेर स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड हरुलाई किन लाग्यो ? यस्तो रोगले स्थायी कमिटी सदस्य कमरेडहरुलाई किन गाज्यो ? स्थायी कमिटीमा त शिर्षत तहका नेता गण नै छन । मुलुकको राजनीतिक अबसर, जस, अपजस सबै उहाँहरुकै बिचमा घुमिरहेको छंदै थियो र आज पनि छ । हाम्रो सरकारले गरेको राम्रो कामलाई हेरेर भारतले इर्ष्या गरिरहेको छ । उसका मिडियाहरुले हाम्रो सरकारप्रति पोखिरहेको तिक्तता बाट यहि पुस्टि हुन्छ । हाम्रो पार्टी ठुलो अनि शक्तिशाली बनिएकोमा इतर कम्यूनिष्ट देशहरुलाई पिर परिरहेको छ भने कम्यूनिष्ट पार्टीप्रति अवस्था एबं बिस्वास राख्ने अन्य देशका कम्यूनिष्ट कार्य कर्ता हरुलाइ उदाहरणिय बनेको छ । यि कुराहरु शिर्षत नेता गण अनभिज्ञ छन भनि जिकिर गर्न सान्दर्भिक हुन्न।
कहिले काँही अगाडिको रातिसम्म मज्जाले बासी रहेको रातो भाले भोलि पल्ट बिहान रोगका कारण खोरमा मरिरहेको पाइन्छ । रोग रोग नै हो । लोभ - लालची , जाल _ झेल तथा षडयन्त्रहरु राजनेताहरुमा आयो भने कोरोना भन्दा पनि खतरनाक रोगका रुपमा घर गर्छ । यस्ता रोगले प्रगति हुनबाट रोक्दछ । हाम्रा नेताहरुमा लोभ लालची , षडयन्त्र जस्ता रोगले आक्रन्त भएको अडकलबाजी राजनीतिक छेत्रमा चलिरहेको छ । कोरोना रोगको दबाइ नभएता पनि हाम्रा नेताहरुलाई लागेको रोगको दबाइ छ । उहाहरुले ठेलिका ठेलि मार्क्सवाद त पढ्नु भयो । मार्क्सवादी दर्शन कार्य कर्तालाई पढाउनमा लागु पनि गरे । तर जीवनमा पालना गर्नु पर्छ भन्ने चेत उहाहरुमा आएन। अतः अब उहाँहरुलाइ चउरमा राखेर बाख्रा गोठाला गर्दै गरेको कार्यकर्ता बाट मार्क्सवादी दर्शनको परिपालनाबारे पढाउन लगाएर जाल- झेल रोगबाट मुक्त बनाएर राजिनामा जस्ता अप्राकृतिक सवाल हटाउन लगाएर पार्टीको र सरकारको कामलाई सररर अगाडि बढाउनु पर्दछ भनि कार्य कर्ताको माग जोडदार उठिरहेको छ ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका आदरणीय संस्थापक महासचिब कमरेड पुष्पलाल लगायतबाट जत्ति बेला पार्टीको स्थापना भएको थियो, पक्कै पनि कम्यूनिष्ट पार्टी भित्र शिर्ष नेताहरु पनि यत्ति धेरै जाल- झेलमा लाग्छन् भन्ने लागेको थिएन होला । कमरेड पुष्पलाल ! आज यहाँलाई सम्झने सिलसिलामा यहाFहरुबाट स्थापना गरिएको पार्टी अनि नेतागणका बारे ४२ औं स्मृति दिवसमा यसरि नै सम्झिए । स्वर्गीय कमरेडप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।